IRotterdam IHague eya eMilan Bergamo iinqwelomoya eTransavia ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IRotterdam IHague eya eMilan Bergamo iinqwelomoya eTransavia ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iinqwelomoya ezisuka eRotterdam IHague e-Milan Bergamo eTransavia ngoku
Ukuphehlelelwa kathathu ukuya kwesine ngeveki ngeveki ukuya kwisixeko sesibini ngobukhulu eNetherlands kwihlobo elizayo, umphathi wexabiso eliphantsi waseDatshi uya kuyonyusa kakhulu imephu yendlela kaMilan Bergamo emantla ntshona yeYurophu.
I-Transavia iqala ikhonkco eRotterdam Isikhululo senqwelomoya saseHague ukusuka kwisikhululo senqwelomoya iMilan Bergamo.
IRotterdam liziko eliphambili lezobugcisa kunye nezoqoqosho kunye nokongezwa okubalulekileyo kwinethiwekhi kaMilan Bergamo.
Ukuba iqabane elitsha lenqwelomoya liqonde ukubakho kweemarike luphawu oluqaphelekayo lomthamo weLombardy kunye nemfuno ekhulayo.
Isikhululo senqwelomoya iMilan Bergamo sibhengeze ukuqala kokudibana kweTransavia neRotterdam IHague, ephawula ukongezwa kwenqwelomoya entsha yesithathu kwisango laseLombardy kwezi nyanga zidlulileyo. Ukuphehlelelwa kathathu ukuya kwezine kwiveki ngeveki ukuya kwesona sixeko sikhulu eNetherlands kwihlobo elizayo, umphathi wexabiso eliphantsi waseDatshi uya kunyuka kakhulu UMilan BergamoImephu yendlela eya emantla-ntshona eYurophu.
UGiacomo Cattaneo, uMlawuli weCandelo lezoPhapho lwezoRhwebo, i-SACBO uthi: “Ikhaya elilelona zibuko likhulu eYurophu, iRotterdam lelona ziko liphambili lezobugcisa nezoqoqosho kwaye lilongezo elibalulekileyo kwinethiwekhi yethu. Ukuba iqabane elitsha lenqwelo-moya livume ukubakho kweemarike luphawu olubonakalayo lwamandla e-Lombardy kunye nokunyuka kwebango.
Ukujoyina inkonzo esekwe eMilan Bergamo e-Eindhoven, ukumiliselwa kwekhonkco leTransavia eRotterdam kuya kunika iqela elithwala i-Air France-KLM isabelo se-30% senethiwekhi yesikhululo seenqwelomoya saseDatshi. Ngoku ukubonelela ngeenqwelo moya ezikufutshane ezingama-300 eziya eNetherlands ngehlobo elizayo, indawo yaseLombardy iya kuba nonxibelelwano olubalulekileyo kuqoqosho lwesixhenxe ngobukhulu eYurophu yi-GDP.
UMarcel de Nooijer, Transavia Umphathi omkhulu, uthi: “Siqinisekile ukuba sijonge phambili kwihlobo lowama-2022 kwaye sonwabile ngokongezwa konxibelelwano lwethu noMilan Bergamo. Oku kusenza ukuba sikwazi ukuqhubeka nokuphendula kwiminqweno yabakhweli bethu abafuna ukufumana indawo ezintsha. Ehlotyeni sibonile ukuba amaDatshi anomdla wokuhamba kwakhona, umzekelo ngeholide okanye ngokundwendwela usapho. Siyabona ukuba ukubhukisha kweli lwindla kuyaqala kwaye sikwanethemba eliphezulu ebusika. Sinethemba lokuqhubeka nalo mfutho ukuya ehlotyeni lowama-2022. ”
IRotterdam Isikhululo senqwelomoya saseHague (esasikade sisisikhululo seenqwelomoya iRotterdam, iVliegveld Zestienhoven ngesiDatshi), sisikhululo seenqwelomoya esincinci esisebenza eRotterdam, isixeko sesibini ngobukhulu eNetherlands kunye neHague, ikomkhulu lolawulo nelasebukhosini. Ime kwi-3 NM (5.6 km; 3.5 mi) emantla ntshona eRotterdam eSouth Holland kwaye sesona sikhululo senqwelomoya sixakekileyo eNetherlands.
Isikhululo senqwelomoya saseOrio al Serio, ibhalwe njenge Isikhululo senqwelomoya iMilan Bergamo, sisikhululo senqwelomoya sesithathu esixakekileyo e-Itali. Ime kummandla kamasipala waseOrio al Serio, 3.7 km kumazantsi mpuma eBergamo e-Itali.